Ampidiro ao amin'ny macOS amin'ny alàlan'ny Firefox | Avy amin'ny mac aho
Ampidiro ao amin'ny macOS ny fanamarinana nomerika
Ny zavatra holazaiko anio dia zavatra tsy maintsy ataon'ny mpampianatra fampianarana ambaratonga faharoa mba hahafahany miseho amin'ny lisitra fanoloana ary manolotra ny vaomiera amin'ny fifaninanana famindrana amin'ny taona manaraka. Ho an'ity, ny minisiteran'ny Fanabeazam-pirenena, manomboka amin'ny volana aprily, Adidiny fa raha te-hanoratra ny fanovana ao amin'ireo fangatahana ireo dia sonia nomerika izany.
Mba hanaovana izany dia mila mangataka sonia nomerika ianao ary ny iray amin'ireo safidy dia amin'ny alalàn'ny a Taratasy nomerika Raha tsy manana klavie misy mpamaky DNI elektronika ianao, raha izany no izy dia tsy maintsy mandeha mangataka PIN fotsiny ianao avy amin'ny Polisim-pirenena ary rehefa hanao sonia nomerika ianao dia ampidiro ny DNI anao ary apetrakao izany PIN izany.
Raha te hanana mari-pahaizana nomerika ianao ny tokony hataonao amin'ny Mac dia tsotra be ary amin'ny dingana vitsivitsy dia azonao atao ny manamboatra azy. Ny zavatra voalohany tokony hataonao dia ny miditra amin'ny tranonkala http://www.cert.fnmt.es/certificados amin'ny alàlan'ny navigateur Firefox ho an'ny Mac.
Ao amin'ny tranonkala izay tondroinay etsy ambony dia tsy maintsy manomboka andian-dingana izay hamaranana amin'ny mailaka izay halefa aminay miaraka amin'ny teny miafina. Andao hojerentsika ny fomba handefasana izany mailaka izany amintsika:
Mampiditra ny tranonkala amin'ny alàlan'ny browser Firefox izahay.
Eo amin'ny ilany ankavanan'ny tranonkala, kitiho eo Raiso / havaozy ny taratasy fanamarinana nomerika anao.
Ankehitriny eo amin'ny pejy aseho, kitiho ny ilany ankavia eo Olona ara-batana.
Ao amin'ny varavarankely manaraka eo amin'ny lafiny ankavia dia tsindrio ihany koa Makà taratasy fanamarinana lozisialy> Fampiharana an-tserasera ho an'ny mari-pahaizana izay, rahateo, dia ny Digital Certificate izay hapetratsika amin'ny Mac.
Atoro antsika ny efijery iray izay tsy maintsy ampidirintsika amin'ny data. Fenoy ny angon-drakitra rehetra sy ny mailaka handefasan'izy ireo amintsika ny teny miafina, fa alohan'ny tsindrio Mandefasa fangatahana tsy maintsy manaiky ny fepetra ao isika «Tsindrio eto raha hijery sy hanaiky ny fepetra famoahana taratasy fanamarinana ».
Ho tonga ny mailaka miaraka amina kaody izay tsy maintsy soratantsika. Miaraka amin'ity Kaody Fampiharana ity sy ny antontan-taratasy momba ny mombamomba anao dia tsy maintsy mandeha any amin'ny birao fisoratana anarana nomen'ny FNMT-RCM ianao hanaporofoana ny mombamomba anao. Ho an'ny mahamety anao, azonao atao ny mampiasa ny serivisy toerana misy ireo birao akaiky indrindra, izay ho hitanao ao amin'ny foibenay Elektronika ao MANOKA NY FAHAFAHANAO.
Rehefa manao an'ity dingana ity izahay dia handefa ny taratasy fanamarinana nomerika izay tsy maintsy ampidirinay ao anatin'ny Kitendry key MacOS. Mba hanaovana izany dia tsy maintsy manaraka ireto dingana manaraka ireto ianao:
Manokatra izahay Ny fidirana amin'ny fitendry izay no ahitantsika azy ao Launchpad> folder LAZAO> fidirana Keychain.
Ao amin'ny tsanganana ankavia ao amin'ny faritra ambany dia tsindrio ilay entana Ny fanamarinana.
Mandeha amin'ny menio ambony indrindra isika izao ary tsindrio File> Ampidiro entana
Izahay dia mitady ilay rakitra Certificate ao amin'ny fampirimana fampidinana raha toa ka nisintona azy teo izahay ary tsindrio ny Import.
Rehefa avy nanafatra ny mari-pankasitrahana ary nanaiky ny fepetra naseho taminay dia efa napetraka ao amin'ny Mac anay ny Fanamarihana nomerika ary vonona izy rehefa ilaina izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » High Sierra macOS » Ampidiro ao amin'ny macOS ny fanamarinana nomerika
Misaotra tamin'ny fandraisanao anjara. Efa nanandrana aho araka ny nambaranao, saingy tsy mandeha izany. Rehefa manafatra entana aho ary misafidy ilay taratasy fanamarinana (endrika .crt) dia tsy hita taratra amin'ny "My Certificat" izany, amin'ny "All item" ihany, fa toa tsy napetraka izany aho, satria rehefa manandrana mampiasa ny taratasy fanamarinana hidirana amin'ny sehatra na hanaovana sonia antontan-taratasy tsy fantatry ny Mac io taratasy fanamarinana io. Efa nanandrana imbetsaka aho fa tsy misy. Inona no azoko atao? Misaotra mialoha.
Misaotra betsaka anao amin'ny fampiasa, vao nametraka ny taratasy fanamarinana nomerika (.pfx) aho ary hita taratra amin'ny "My certificat" fa tsy ilay tapakila maitso izay miseho amin'ny sarinao milaza fa mitombina izy io, milaza amiko fa ny taratasy fanamarinana nataoko tsy azo atokisana. Fa kosa, raha vao nametraka dia nanandrana nanamarina azy tao amin'ny birao elektronika an'ny trano lakolosy aho ary manome ahy (mazava ho azy) fa marina izany.
Fa maninona ary ahoana no ahitako ny peratra fanalahidy hiseho ho manan-kery?
Misaotra mialoha sy misaotra
Steve Wozniak koa mamafa ny kaonty Facebook-ny
Araraoty tsara ny Dashboard sy ny birao maromaro amin'ny macOS